आज सुनको मुल्य बढ्यो, कतिमा किनबेच ? – Samriddhakhabar
आज सुनको मुल्य बढ्यो, कतिमा किनबेच ?
September 6, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on आज सुनको मुल्य बढ्यो, कतिमा किनबेच ?
नेपाली बजारमा आज सुनको मुल्य ३ सयले बढेको छ । सोमबार प्रतितोला ९१ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको छापावाल सुनको मुल्य आज प्रतितोला ९१ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम भएको हो ।
नेपाल सुुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार तेजाबी सुन प्रतितोला ९१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, चाँदीको मुल्य पनि ५ रुपैयाँले बढेर १३ सय २० रुपैयाँमा खरिद बिक्रि भएको महासंघले जनाएको छ ।
१९ भदौ, पोखरा । असारको सुरुदेखि नै बाढी पहिरोले बितण्डा मच्चाउन थालेको गण्डकी प्रदेशमा शुक्रबारसम्म ८ बालबालिकासहित ३४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सयौं बिस्थापित भएका छन् । अर्बौं रुपैयाँको क्षति पुगेको छ ।
कास्की र पर्वतमा बिहीबार र शुक्रबार गएको पहिरोले १८ जनाको ज्यान लियो । पर्वतमात्रै ११ जनाले पहिरोमा ज्यान गुमाए । अहिले उनीहरुको शव जिल्ला अस्पताल पर्वतमा ल्याइएको छ । सोही पहिरोका कारण पोखरा बागलुङ जोडने मुख्य राजमार्ग अहिले अवरुद्ध छ ।
भूपी शेरचन राजमार्गमा कतै ठूला पहिरोले पुरिएको छ त कतै बाढीले बगाएको छ । यतिबेला पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ वासी राजमार्ग भएर आउजाउ गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पर्वतकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीले बताइन् ।
कुनै घटना घट्यो र गम्भीर घाइते भए, गम्भीर खालको बिरामी भएर जिल्ला अस्पतालबाट पोखरा वा काठमाडौं रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अहिले हेलिकप्टर कै जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
गत असारमा पर्वतको दोबिल्लामा बाढी, पहिरोले भूपी शेरचन राजमार्गको पर्वत खण्ड हेरिरहेका इन्जिनियरसहित ३ जना बगाएको थियो । त्यही अहिले ठूलो पहिरो खसेर पुरै सडक नै बगाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेका अनुसार भूपी शेरचन राजमार्गको पर्वत खण्डमा मात्रै ११ वटा पहिरो खसेका छन् । तीमध्ये अधिकांश ठूला र पहाडैसहित खसेका छन् ।
सबैभन्दा धेरै पर्वत खण्डको कुश्मादेखि पातीचौरसम्म ठूला पहिरोले राजमार्ग थुनेको पाण्डेले बताइन् ।
संखुवासभामा ए’कै प’रि’वा’र’का ६ ज’ना’को ह’त्या
एकै परीवारको ६ जनाको यसरी दु,:खद ह,त्या भयो । देख्ने सबै ड,राए
साउन ५ गते देखि ४ करोडको आईपीओ आउने भयो
July 13, 2021 खबर समृद्ध
ज्योती लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ ५ लाख ९४ हजारले पाए, कसरी हेर्ने नतिजा ?
March 26, 2021 March 26, 2021 खबर समृद्ध
एनएमबि क्यापिटलद्वारा डिम्याट खाता नविकरण गर्न अनुरोध
July 2, 2021 July 2, 2021 खबर समृद्ध